အက်ဖ်အေဖလား အာဆင်နယ် ဗီလာ၊ ၀က်စ်ဟမ်း အနိုင်ရ | DVB
အက်ဖ်အေဖလား အာဆင်နယ် ဗီလာ၊ ၀က်စ်ဟမ်း အနိုင်ရ
ဓာတ်ပုံ (အက်ဖ်အေ ၀က်ဆိုဒ်)
BIRMINGHAM, ENGLAND - JANUARY 25: Carles Gil of Aston Villa is tackled by Ryan Fraser of Bournemouth during the FA Cup Fourth Round match between Aston Villa and AFC Bournemouth at Villa Park on January 25, 2015 in Birmingham, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
BRISTOL, ENGLAND - JANUARY 25: Diafra Sakho of West Ham United celebrates scoring his side's opening goal during the FA Cup Fourth Round match between Bristol City and West Ham United at Ashton Gate on January 25, 2015 in Bristol, England. (Photo by Paul Gilham/Getty Images)
BRIGHTON, ENGLAND - JANUARY 25: Tomas Rosicky of Arsenal celebrates with team-mates after scoring his team's third goal during the FA Cup Fourth Round match between Brighton & Hove Albion and Arsenal at Amex Stadium on January 25, 2015 in Brighton, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက်နေ့က ယှဉ်ပြိုင်သွားတဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ အာဆင်နယ် အသင်းက ဘရိုက်တန် အသင်းကို ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ဂိုးတွေကိုတော့ ဝေါလ်ကော့၊ အိုဇေလ်းနဲ့ ရိုဆစ်စကီးတို့က သွင်းယူပါတယ်။ အက်စတွန်ဗီလာက ဘွန်မောက်ကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုး၊ ၀က်စ်ဟမ်းယူနိုက်တက်က ဘရစ္စတိုကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိပြီး ပဉ္စမအဆင့်ကို တက်ရောက်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ရက်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ အသင်းကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ချဲလ်ဆီး၊ မန်စီးတီးတို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရသလို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်က ကိန်းဘရစ်ခ်ျအသင်းနဲ့ သရေကျခဲ့ပါတယ်။
Previous story အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ရောက်ရှိနေ
Next story ကလေး ၁ ဦးအပါအ၀င် မြန်မာအလုပ်သမား ၃ ဦး ထိုင်းတွင် အသတ်ခံရ